फेरी नेता नेताबीच कुर्सि हानाहान भएको भिडियो भाइरल भएपछि खुल्यो रहस्य ,प्रचण्ड र ओलीले गर्दा जनता जनता बीच लडाई हुने! – Complete Nepali News Portal
फेरी नेता नेताबीच कुर्सि हानाहान भएको भिडियो भाइरल भएपछि खुल्यो रहस्य ,प्रचण्ड र ओलीले गर्दा जनता जनता बीच लडाई हुने!
Kamal Sargam October 5, 2020
नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सभामा नाराबाजी गरेको छ । संसदीय मर्यादा कायम नभएको भन्दै नाराबाजी गरेको हो । राजधानी दाङ लैजानुको औचित्य पुष्टि गर्न आग्रह सरकारलाई आग्रह गरेको छ । सोहि क्रममा कुर्सि तोडफोड हुन थालेको छ।
केपी शर्मा ओलीको बुई चढेर राजधानीको प्रस्ताव ल्याउन गलत भएको भन्दै जनताले खुसी मनाउने गरी अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । राजनीति स्वार्थका लागि राजधानी सारिएको तर्क कांग्रेसको छ । संसद अवरुद्धपछि आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित भएको छ। हेरौ भिडियो कुराकानी :